Apply for TFN fellowship 2020 – Light around Corners
Apply for TFN fellowship 2020
July 11, 2019 June 29, 2020 anish_am.blog
Bachelor पछि नेपाली समाज बुझ्ने र नेपाल घुम्ने रहर आझै बध्दै गयो। मोबाइल चलाउदै गर्दा Teach for Nepal को बिज्ञापन देखे “What if your first job was changing the nation?”
जे जस्तो भएपनि नेपालमै बस्नु मन छ, देश नै परिपर्त गर्ने काम भने पछी त म लागि हाले Teach for Nepal को यात्रा तर्फ। फोर्म भरे, अफिस पनि गए, कुरा भयो। हरेक भेट र कुरामा एउटा प्रस्न जहिले हुन्थ्यो, Teach for Nepal किन? त्यो समयमा जे उत्तर दिए पनि म संग त्येसको उत्तर थिएन । प्रस्न प्रस्नमात्रै लाग्थ्यो तर प्रस्न खोज रहेछ। चित्त बुझ्दो उत्तर अहिले सम्म थाहा छैन, सायद २ बर्षको Fellowship को दौरान थाहा होला । तर एउटा कुरामा पक्का भएको छु, गन्तब्य जहाँ गएर सके पनि बाटो सहि रोजेको छु आफ्नो लागि।
Collaborative schools Network र सन्सर मायाको भ्रमन र त्यहा Teach for Nepal का alumni हरुले गरिरहेको काम हरु देखेर खुसी भए ।
एक दिन, एउटा कार्येक्रममा ३० मिनेट ढिला पुगे, मलाई कारण सोधियो, तर जहाँ पनि धिलो पुग्ने मन्छे सङ के कारण हुन सकथ्यो र। उम्किन खोजे, तर उता बाट कडा घोसन आयो कि समयमा नपुग्नु भनेको कर्येक्रमको अपमान गर्नु हो अथवा आफू स्वयेम को। धेरै दिन सम्म कुरा पचेन, पच्ने कुरा पनि थिएन । मनमा राख्ने कुरा पेटमा रख्दै बसेको रहेछु। जुन दिन मनमा रखे, त्येसै दिन मन मस्तिस्कबाट समयको महतव बुझे। त्यो कुरा बिझ्न चही learning institute नै पुग्नु पर्यो।
Previous postWhy Teach for Nepal Walkathon?
Next postमनको कुरा